Welcome, visitor! [ Register | Login ] GoldMyanmar
Car (21) Bus (9) Pickup (10) Salon / Sedan (16) Trucks (9) english movie (2) ကုန်ပစ္စ္စည်း (16) စားသုံးကုန် (1) လက်မှု (0) လူသုံးကုန် (0) အလှကုန် (0) အသုံးအဆောင်ပစ္စ္စည်းများ (2) အ၀တ်အထည် (12) တရားတော်များ (1) အိမ်ခြံမြေ (82) Apartments (28) Condominium (15) Housing Land (29) Industrial Land (19) Private Homes (48) Rooms (27) ရွှေမြန်မာ
Home » ရွှေမြန်မာ
Shareကျွနုပ်တို့ Website သည်၊ အိမ်ခြံမြေ၊ တိုက်ခန်း၊ အခန်း၊ ရောင်းဝယ်ငှားရမ်းလိုသူများအတွက်၊ အများသူငါတို့ သိရှိစေရန် ဤ website တွင် အခမဲ့ကြေငြာနိုင်ပါသည်။ လူတစ်ဦးချင်းအနေနှင့် မိမိပိုင်ဆိုင် ပစ္ပ္ပ္ပ္စ္စည်းကို ၎င်း၊ သို့မဟုတ် အိမ်ခြံမြေ၊ တိုက်ခန်းရောင်းဝယ်ငှားရန်းအကျိုးဆောင်များ၊ အေဂျင်စီများ၊ ရောင်းဝယ်ငှားရမ်းလုပ်ငန်းငယ်များ၊ လုပ်ငန်းကြီး ကုမ္ပ္ပ္ပဏီများ စသည်ဖြင့် မည်သူမဆိုလွတ်လပ်စွာ ဤ website ကိုအသုံးပြု ၍ အခမဲ့ကြေငြာ ရောင်းဝယ်နိုင်ကြပါသည်။ ဤ website သို့ တစုံတရာမျှ ပေးရန်မလိုအပ်ပါ။
မိမိရောင်းဝယ်၊ ငှားရမ်းလိုသော အိမ်၊ ခြံမြေ၊ တိုက်ခန်း၊ ကွန်ဒို၊ အခန်းစသည်များကို၊ မိမိတို့ကိုယ်တိုင် ဤ website တွင်ဝင်ရောက်ကာ လိုအပ်သလိုကြေငြာများရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါသည်။ ကျွနုပ်တို့ထံ အကူအညီတောင်းခံလာပါက ဆောင်ရွက်ပေးသွားပါမည်။ သို့ရာတွင် ပညာရှင်တဦးဦး၏ ဆောင်ရွက်ခပေးရန်ငွေကို အကုန်အကျခံရပါမည်။ မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကြေငြာလျှင် တစုံတရာမျှ၊ မည်သူကိုမျှ ပေးရန်မလိုအပ်ပဲ၊ အခမဲ့ ကြေငြာလိုသလောက်ကြေငြာ နိုင်ကြပါသည်။
www.goldmyanmar.com ဟူသော ရွှေမြန်မာများဖြစ်ကြသည့် ကျွနုပ်တို့သည် ဤ website ကို ၂၀၁၂ ခုနှစ် မေလတွင် စတင်တည်ထောင်ကြပါသည်။ ကျွနုပ်တို့ဟုဆိုရာ ၌ ကျွနုပ်တို့အဖွဲ့တွင် website ပညာရှင်များ၊ ဈေးကွက်ပညာရှင်များ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုပညာရှင်များ၊ အကြံညဏ်ပေးသူများ စုပေါင်းပါဝင်ပါသည်။
ကျွနုပ်တို့ website လုပ်းငန်းက အိမ်ခြံမြေရောင်းဝယ်ငှားရမ်းခြင်း၊ ကုမ္ပ္ပ္ပဏီထုတ်ကုန် ပစ္ပ္ပ္ပ္စ္စည်းများ၊ မော်တော်ယဉ်များကို အများပြည်သူတို့တနေရာထဲတွင် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ သတင်းရယူကြည့်ရှုနိုင်စေရန် မည်သူမဆိုအခမဲ့ ကြေငြာများ မိမိတို့ကိုယ်တိုင် စိတ်တိုင်းကျ ရောင်းလို ၀ယ်လိုသည်များကို ဤ website တွင်လွှင့်တင်ကြေငြာနိုင်ပါသည်။ သတင်းအချက်အလက်များ ပြန့်နှံနေပါက စုံစုံးလင်လင်သိနိုင်ရန် လူတိုင်း အတွက်အခက်အခဲဖြစ်စေပြီး၊ ရောင်းသူနှင့်ဝယ်သူတို့မဆုံးရှုံးသင့်ပဲ ဆုံးရှုံးရခြင်းကို အမြဲတစေကြားသိနေကြရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဤ websiteတွင် ကြေငြာခြင်းအားဖြင့် ရောင်းလိုသူ၊ ၀ယ်လိုသူနှစ်ဦး နှစ်ဖက်စလုံး နစ်နာဆုံး ရှုံးမှုမရှိပဲ ဈေးမှန်၊ ပစ္ပ္ပ္ပ္စ္စည်းမှန်များကိုရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းများရှိစေရန် ရည်ရွယ်လျှက် အခမဲ့ ကြေငြာခွင့်ပြုလုပ်ကိုင်ကြစေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဤသို့ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းများအပြင်၊ တရားတော်များ ကြည့် ရှုနားဆင်ခွင့်အတွက်၊ ကုသိုလ်ဖြစ်ထည့်သွင်းထားကာ၊ လူငယ်များအတွက်လည်း အပန်းဖြေပျော်ရွှင်မှုခံစားနိုင်ကြစေရန် မြန်မာရုပ်ရှင်များနှင့် နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်များကို ကြည့်ရှုနိုင်ရေး စီမံဆောင်ရွက်ပေးထားပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်ပရောက် တိုင်းနိုင်ငံအသီသီးမှ မြန်မာလုပ်သားများအပန်ဖြေကြည့်ရှုနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
သတင်းကဏ္ဍတွင် လူတို့၌ တခါတရံ ပြင်ပြသောဆန္ဒဖြင့် အဖြစ်မှန်ကို အများသူငါသိရှိစေရန် တင်ပြလိုသော စိတ်ရှိကြသည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့တင်ပြနိုင်ရန် နေရာမရှိသေးပါ။ ထို့ကြောင့် မိမိတို့တွင် ဖေါ်ပြစေလိုသော သတင်းမှန်များရှိနေပါက ဤ website တွင်ဖော်ပြရန်၊ သတင်းအချက်အလက်အပြည့်အစုံ၊ သတင်းဓါတ်ပုံ၊ ဗီဒီယိုဖိုင်များ ပေးပို့ကာ သတင်းကိုဖော်ပြနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ယင်းပေးပို့မှုများကို ချက်ခြင်းလေးလေးစားစားဖြင့် ဖေါ်ပြပေးမည်ဖြစ်သော်လည်း အခြေအနေ အချိန်အခါမသင့် အခက်အခဲများရှိပါက အနည်းငယ်နှေင့်နှေးနိုင် မည်ဖြစ်သည်။ မည့်သို့ပင်ဖြစ်စေ အမြန်းဆုံးဖေါ်ပြပေးနိုင်ရန် ကြိုးစားသွားမည်သာဖြစ်သည်။ ဤ website ကိုအသုံးပြုသူတို့၏ အကြံဥာဏ်များကိုလည်း တလေးတစားနာယူလုပ်ကိုင်မည်။ မလုပ်နိုင်သောကိစ္စဖြစ်နေ လျှင်၊ အကြိုးအကြောင်းအလျှင်အမြန် အကြောင်းပြန်ကြားပေးပါမည်။
ကျွနုပ်တို့သည် မြန်မာပြည်သူတို့၏ အခက်အခဲအနည်းငယ်ကို တဒေါင့်တနေရာမှ ဖြစ်နိုင်သလောက်ကူညီ ဖြေးရှင်းပေးသည့် လူမှုရေးအကြိုးပြု website တခုလည်းဖြစ်ပါသည်။ အခမဲ့ ကြေငြာခြင်း၊ ပြည်သူတို့ကို အသိပေးခြင်းလုပ်ငန်းတွင် နိုင်ငံနှင့်လူမျိုးတို့သိက္ခာ၊ အကျပ်အတည်း၊ ယာဉ်ကျေးမှုနှင့် ဂုဏ်ကြက်သရေတို့မထိခိုက် မဆုံးရှုံးရစေရန်ဌင်း၊ ကျွနုပ်တို website ပေါ်တွင် အများတကာတနေ့တခြားယုံ ကြည်စိတ်ချမှုတို့ပွား လာအောင်ဆောင်ရွက်မည်။
သင့်လုပ်ငန်းကို ကြော်ငြာပါ	ဤဆိုက်တွင် ကြော်ငြာလိုပါက အီးမေးလ်:ပို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ gmbolat@gmail.com
© 2014 . ရွှေမြန်မာ All Rights Reserved.
EmPowered by G5 Web Development